Malaayiin Musliim ah oo maanta taagan banka Carafo. – Madal Furan
Hoy > Warka > Malaayiin Musliim ah oo maanta taagan banka Carafo.
Malaayiin Musliim ah oo maanta taagan banka Carafo.
Editor August 20, 2018 Warka 0
Muqdisho(Madal Furan) – Maanta oo ah 9ka bisha Carafo(dulxaj) waxaa iyagoo khushuucsan ku qulqulayaa Banka Carafo Xujeyda Baaytka Allah si ay u gutaan rukni ka mid ah rukniga Axkaamta Islaamka,waxaana sanadkaan xajinaya in ka badan labo Milyan oo Muslimiin ah oo ka kala yimid gudaha dalka Sacuudiga iyo dibadiisa.
Sida uu xadiiskiisa shariifka uu ka sheegay Rasuulkeyna Mahamed (NNKH),Xajka oo aansax noqonayn ilaa laga istaago baanka carafo marka qoraxdu soo baxda ilaa ay ka dhacdo, wuxuuna yiri Rasuulkeyna suuban “Xajka waa Carafo”
Maanta waxay xujeyda istaagayaan Banka Carafo iyadoo Malaa”ikta allah dhinac walba ka hareeraysan tahay waxayna Allah ka baryayaan in loo danbi dhaafo Xujeyda iyo inuu Naarta ka xoreeyo adoomankiisa Taagan Carafo.
Sida laga soo wariyay Xadiiska wuxuu yiri Nabigeyna suuban ducada ugu kheyrka badan “ waa tan maalinta Carafo Illaah la baryo.
Marka la gaaro Duhurkii Imaamka Masjidka Nimra ee Carafo waxa u xujeyda tagayaan Banka Carafo u jeedinayaan khudbad wacdi ah kadibna xujeyda waxay dukanayaan salaadda Duhurka iyo casarka oo laa isku daray la soo gaagaabiyay.,waxaan la sheegay buurta Carafo inay tahay meesha ay isku barteen Nabi Aadan iyo Xaawa markii janada laga soo saaray markaasi ayaa Buurtaasi loo aqoonsay Carafo micnaheedu yahay isbarasho.
Kadib markii ay Xujeydu gutaan waajibaadka farliga ah, waxay marka ay qoraxdu dhacdo urursanayaan dhaxgaanta ay ku tuuri lahaayeen jamaraadka iyagoo berito subax bisha Dulxija 10 ay tahayna ay tagayaan Mina si ay dhagxaanta ugu tuuraan jamaaraadka.
Dhanka kale Soonka maanta oo kale ee 9-ka Carafo waa Sunah mu’akad ah oo la jideeyay.
Roobow oo taageero ka helay xubno ka tirsan Xildhibaano Baarlamaanka DFS.
Kenya oo noqotay dalka ugu hoteelada fiican
Ardayda reer Puntland ee jaamacadda Camuud iyo Qoysas oo ka qaxaya Somaliland